Toerana filokana an-tserasera Makedoniana - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(345 vato, average: 5.00 avy tany 5)
Loading ...Androany, Makedonia no iray amin'ireo toerana fitsangantsanganana malaza indrindra. Ho fanampin'ny tendrombohitra mahafinaritra, farihy ary rivotra madio, manintona mpizaha tany sy trano filokana marobe. Ara-dalàna ny filokana any Makedonia, manana rafitra fahazoan-dàlana ara-dalàna ny firenena. Aorian'ny fahazoana ny fahazoan-dàlana dia azonao atao ny manokatra orinasa filokana, miaraka amin'ny ampahany amin'ny tombony azo avy amin'ny casino mankany amin'ny serivisy sosialy sy fanatsarana ny firenena. Ny filokana dia malaza indrindra amin'ny mponina eo an-toerana, avela hilalao olona mihoatra ny 18 taona ny filalaovana.
Fanamarihana ho an'ireo mpitsidika ny lahatahiry filokana an-tserasera, ankoatry ny filokana an-tanety any Makedonia dia misy mpanao boky marobe koa. Mpanatoky boky miavaka amin'ny hetsika ara-panatanjahantena no niseho voalohany teto Makedonia tamin'ny taona 1999. Taorian'ny taona vitsivitsy tao amin'ny firenena niasa ho an'ny mpanao boky mihoatra ny 80, nahazo alàlana avy amin'ny Ministeran'ny Vola, ary ny isan'ny mpanao boky dia mitombo hatrany.
Lisitry ny Top Sites amin'ny 10 Macedonian Online Online
Lalao an-tserasera ao Makedonia
Miparitaka be ny filokana an-tserasera amin'ireo Makedoniana, indrindra eo amin'ireo tanora latsaky ny 25 taona. Ao amin'ny firenena dia asio tranonkala filokana an-tserasera toy ny mpandraharaha Makedoniana sy vahiny. Vao tsy ela akory izay ny governemanta dia nanambara ny fikasana hametraka ampihimamba amin'ny fanomezana tolotra filokana amin'ny Internet. Araka ny lalàna vaovao momba ny filokana amin'ny Internet any Makedonia, ho voasakana ny fidirana amin'ireo tranonkala tsy misy fahazoan-dàlana. Ny mpamatsy sasany toa an'i Bodog sy Partypoker, dia efa nandao ny firenena.
Ny tranokalan'ny aterineto ao amin'ny aterineto dia manaiky ny mpilalao avy ao Macedonia
Jereo ny lisitry ny tranokala an-tserasera izay manaiky mpilalao avy any Makedonia, ary manolotra kilalao avo lenta sy azo antoka. Eto ianao dia hahita fialamboly marobe manomboka amin'ny masinina slot ka hatramin'ny lalao casino mivantana amin'ireo mpivarotra rindrambaiko malaza toy ny NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, sy ny maro hafa. Azonao atao koa ny mamaky ny hevitray momba ny tranokala an-tserasera, mba hahalalanao ny fampiroboroboana an-tserasera, bonus ary safidy fandoavam-bola tsara indrindra azon'ny mpilalao avy any Makedonia.
Lalao any Macédoine
Makedonia - ity toerana tendrombohitra sy rivotra madio ity, fitsangantsanganana sy rafting, fialamboly amin'ny farihy ary fitsangatsanganana maro. Tonga eto izy ireo mba hankafy tanteraka ny fialan-tsasatra mavitrika iray, fa koa hilalao amin'ny kasino, izay be loatra toa ny tany Las Vegas. Ny fijanonana manaraka dia ny CasinoToplists any Skopje - renivohitra mistery ao Makedonia.
Makedonia - Fampahalalana momba ny jeografia sy tantara;
Tsy misy fetra ny mpiloka amin'ny filokana.
Ny casino malaza indrindra ao Makedonia:
HiT CASINO HOTEL sy Casino Dojran;
Hotel Epinal sy LeGrand Casino;
The Grand Casino.
Ny ara-dalàna ny mpandraharaha eo an-toerana sy avy any ivelany.
Dimanjato dimy ao an-drenivohitr'i Makedonia Skopje miaraka amin'ny adiresy;
Fahagagana mahatalanjona momba ny firenena sy ny mponina ao aminy.
Mponina any Makedonia ary tantara ara-tantara fohy
Makedonia, izay niantso tsara ny Repoblikan'i Makedonia na ny Repoblika Yugoslavia teo aloha (FYROM araka ny firaketana ao amin'ny ONU) - firenena kely iray any afovoan'i Eropa, tsy misy lalana mankany amin'ny ranomasina. Ny firenena akaiky azy indrindra: Serbia, Kosovo, Gresy, Albania, Bulgaria.
Na dia manely avy hatrany ny fikambanana miaraka amin'i Aleksandra Lehibe aza ny anarana, dia mbola mpitarika lehibe sy mpitarika miaramila teraka tany Makedonia fahiny, any amin'ny faritanin'i Gresy.
Ny fanjakan'i Makedonia, niforona tamin'ny taona 1991, dia tsy misy afa-tsy 35% amin'ny faritany, izay faritra manan-tantara ao Makedonia. Noho ny anarana maoderina dia teraka ny fifanolanana marobe amin'i Greece, izay manana 65% amin'ny faritany.
Ny tantaran'i Makedonia dia an'arivony taona maro, ity zoron'i Eropa ity dia ampahany tamin'ny Romanina ary avy eo ny fanjakana Byzantine, ny fanjakana Bulgaria, ny fanjakana Serba, ny fanjakana Ottoman, Yugoslavia. Nisy fiantraikany be tamin'ny vahoaka tamin'ny vanim-potoana sosialista sy ny ady Balkan.
Tamin'ny 1991, Makedônia tsy nisy rà nisintaka tamin'i Yugoslavia. Ankehitriny dia repoblika parlemantera izy io. Ny fanovana ara-politika dia nanamarika ny fanovana ho amin'ny tsara kokoa. Any Makedonia, fari-piainana somary avo. Ny firenena dia ao anatin'ny EU sy ny OTAN.
Casino sy filokana ao Masedonia
Androany, Makedonia no iray amin'ireo toerana fitsangantsanganana malaza indrindra. Mba hanaovana izany, be dia be ny antony, fa ny mpandeha sasany mandeha noho ny fampiononana sy fahafinaretana hilalao kasino maro.
Teo amin'ny sisin-tany any Gresy no nanokatra karazana mifanohitra amin'izany: trano filokana mamirapiratra sy tanimboaloboka tsy misy farany. Misy trano filokana ao Skopje - renivohitra tsara tarehy.
Ny lalàna Makedoniana dia toy izany fa ny zon'ny mpandraharaha filokana dia saika tsy voafetra. Zon'ny olom-pirenena na mpifindra monina manokatra trano filokana, raha manana vola voafetra eo am-pelatanany izy ireo. Aorian'ny fahazoana fahazoan-dàlana dia avela handamina casino araka izay itiavanao azy.
Ao amin'io ampahany amin'ny tombom-barotra azon'ireo orinasa filokana io dia laniana amin'ny fanorenana lalana, famerenana ny toerana manan-tantara ary ny tanjona sosialy.
Ny ankamaroan'ny trano filokana any Makedonia dia miasa mandritra ny ora, fa tsara kokoa ny mamaritra mialoha ny fandaharam-potoana. Tsy maintsy 18 taona ny vahiny. Matetika, ny fehezan-akanjo dia miakanjo akanjo lava, fa misy tranga tsy manam-paharoa.
Ny casino malaza indrindra ao Macédoine
Tsy dia lehibe loatra ny firenena, fa ny tanàna lehibe dia tsy maintsy manana casino vitsivitsy.
Skopje dia manana trano filokana telo lehibe: Casino 23 - Hotel Bristol, Le Grand Casino - Hotel Holiday Inn, Viva Casino.
Ny casino lehibe indrindra ao Ohrid dia Metropol Lake Resort & Casino.
Ao Gevgelija dia faritra filokana tena izy. Ireto misy tranobe avo lenta, afaka manome fahafaham-po ny mpilalao mitaky be indrindra: Casino Flamingo Hotel 5 *, Apollonia Casino, Casino Motel Senator, Princess International.
Tao Doyrane dia niorina ny HiT CASINO HOTEL sy Casino Dojran.
Ny orinasam-pitaovana lehibe indrindra dia Bitola Hotel Epinal sy LeGrand Casino.
Koa satria firenena kely, ary filokana maro, vitsivitsy monja amin'izy ireo no maniry fatratra. Saingy mbola mila fiheverana manokana Casino Hotel Flamingo 5 * ao Gevgelija.
Ity trano fisakafoanana mihaja ity dia mitovy amin'ny trano mimanda kely na akanim-borona ahazoana alokaloka malefaka kokoa. Eo anoloan'ny valan-javaboary no misy.
Ny efitrano filokana dia mahazaka latabatra 16 amin'ny filalaovana karazana poker sy blackjack isan-karazany, ary manana latabatra amerikanina 10 koa. Ireo mpankafy milina filokana dia hahita ampy amin'izy ireo - slot 440.
Na dia efa ela aza i Flamingo dia miasa, tamin'ny 2013, dia nosoloin'ny tompony. Noho ny fampiasam-bola 25 tapitrisa euro complex dia niova tanteraka.
Casino Princess International ao amin'ny Gevgelija Casino dia ao anatin'ny tambajotra iraisam-pirenena. Eto ny famolavolana lafo vidy miaraka amin'ireo fotodrafitrasa maoderina tsy manelingelina. Miasa hatrany ny mpikarakara mamorona atmosfera manokana. Famoriam-bahoaka tsy tapaka, hetsika, fandaharana fialantsasatra, fampisehoana kintana.
Le Grand Casino - Hotely Holiday Inn any Skopje - safidy mety indrindra handaniana takariva fialamboly. Eo amoron'ny renirano Vardar no misy ilay trano fisakafoanana misy fika. Akaiky ny trano mimanda tamin'ny taonjato faha-6 sy ny tetezana vato tamin'ny taonjato faha-15. Milalao eto dia nahita latabatra poker 2, latabatra 13 ho an'ny lalao hafa, slot 15.
Lalao amin'ny Internet ao amin'ny faritanin'i Makedonia
Tany Makedonia, navela ny karazana hetsika filokana, anisan'izany ny asan'ny casino an-tserasera. Ao amin'ny firenena miasa tranokalan'ny mpandraharaha am-polony, na orinasa Makedoniana na orinasa vahiny.
Tetezana vato. Adiresy: Keј Dimitar Vlahov broј 1 Skopјe 1000. Iray amin'ireo tetezana malaza indrindra manerana an'i Vardar ao an-drenivohitra. Namboarina imbetsaka ny tetezana ary nanao fanamboarana, araka ny angano, tamin'ny andron'ny Romana.
Tranombakoky ny tolona Makedoniana. Adiresy: Mar 11 minitra, Skopјe 1000. Ny tolona an'ny Museum Makedoniana amin'izao fotoana izao ho an'ny fanjakana sy fahaleovan-tena, nosokafana tamin'ny 2011.
Skopje Kale (trano mimanda Skopje). Adiresy: Centar, Skopјe 1000. Ity rafitra fiarovan'ny Moyen-Orient ity dia mijoro eo afovoan-tanàna ary tsangambato arkeolojika manan-danja indrindra.
Katedraly Church of St. Clemente of Ohrid. Adiresy: Bul. Sveti Kliment Ohridski, Skopјe 1000. Fiangonana manana kôngaly boribory mankasitraka dia naorina indray tamin'ny taona 1970 teo amin'ny toeran'ny tempoly iray mitovy, noravan'ny Nazia.
Monasiteran'i Saint Panteleimon. Adiresy: Zagreb 3 Skopјe 1000. Tempoly krestokupolny tsy manam-paharoa natsangana tamin'ny taonjato faha-12, ohatra tsara tamin'ny maritrano fahagola taloha.
Zavatra mahaliana momba an'i Makedonia sy Makedoniana
Masedoniana - olona tia tanindrazana sy mpanao politika.
Ny ankamaroan'ny vehivavy Masedoniana dia tsy niasa ary nitarika ny trano sy ny fitaizana zaza.
Mandolin - zava-maneno nasionaly Makedoniana.
Ny taonjato 5 taonjato dia teo ambany fitondran'ny Tiorka, ka ny kolontsaina sy ny mozika mampatsiahy an'i Torkia indrindra.
Lake Ohrid - iray amin'ireo tranainy indrindra eto an-tany, dia 5 tapitrisa taona io.
Oro - ny dihy nasionaly, izay tena mitovy amin'ny dihy. Fa ny tanana, dia mila mamorona endrika sarotra tongotra.
0.1 Lisitry ny Top Sites amin'ny 10 Macedonian Online Online
2.1 Lalao an-tserasera ao Makedonia
2.2 Ny tranokalan'ny aterineto ao amin'ny aterineto dia manaiky ny mpilalao avy ao Macedonia
3 Lalao any Macédoine
3.0.1 Mponina any Makedonia ary tantara ara-tantara fohy
3.1 Casino sy filokana ao Masedonia
3.1.1 Ny casino malaza indrindra ao Macédoine
3.2 Lalao amin'ny Internet ao amin'ny faritanin'i Makedonia
3.2.2 Zavatra mahaliana momba an'i Makedonia sy Makedoniana
vola vola maimaim-poana amin'ny Internet